हाम्रो उपकरणमा IOS7सही तरीका बाट स्थापना गर्ने आईफोन समाचार
आईओएस7कसरी स्थापना गर्ने र तपाईंको आईफोनको प्रयासमा मर्दैन
लुइस डेल बारको | | iOS 7
दुई दिन। यो तपाईको लागि समय बाँकी छ iOS7बाट जारी हुन आधिकारिक फारम र सबैजनाले यसको आनन्द लिन सक्दछन् (यद्यपि तिनीहरू पहिले नै एक हप्ताको लागि जीएम स्थापना गर्न सक्षम भएका थिए)। म धेरै मानिसहरूलाई चिन्छु जो आफ्नो उपकरण अपडेट हुने बित्तिकै पागल जान्छन्, त्यसैले मँ पहिले केहि सुझावहरू दिमागमा राख्नुहोस् त्यसो गर्नु अघि।
आईओएस installing स्थापना गर्दा त्यहाँ दुई केसहरू हुन सक्छन्: कि हामीसँग पहिले नै आईओएस GM जीएम स्थापना भएको छ, वा हामीसँग आईओएस iOS छ। यो सिफारिश गरिन्छ कि आईओएस installing स्थापना गर्दा वा कुनै पनि अपरेटिंग सिस्टमले गर्नुपर्दछ। सुरू देखि नैस्पष्ट रूपमा, केहि पनि हुने छैन यदि हामी यो गर्दैनौं, न त हाम्रो आईफोन 'मर्नेछ', तर यो यस तरीकाले गर्नु भन्दा यो उचित हो। यसलाई कसरी गर्ने हेरौं।
सबैभन्दा पहिले, कुनै पनि केसमा, म सिफारिस गर्दछु एस्परर आईओएस .7.0.1.०.१ जारी नभएसम्म (कम्तिमा) आईओएस the मा जम्प बनाउनको लागि। I म यो भन्दछु किनकि पछिल्लो अपडेटको साथ तिनीहरूले ब्याट्री प्रदर्शन जस्ता चीजहरूलाई सच्याउनेछ, जुन वास्तवमै जीएम संस्करणमा देखाउँदछ कि यसले आईओएस than भन्दा बढी ब्याट्री तान्छ। , त्यसैले यदि तपाईं धेरै अधीर हुनुहुन्न भने, अपडेटको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् सुधारहरू र बग फिक्सहरूको साथ अन्तमा तपाईंको उपकरणमा आईओएस install स्थापना गर्न।
यदि हामीसँग हाल हाम्रो उपकरणमा जीएम संस्करण छ र हामी बुधवार आधिकारिक संस्करणमा अपडेट गर्ने योजना गर्छौं भने, म सिफारिस गर्दछु आज र भोलि बीचमा पुनःस्थापना गर्नुहोस् आईओएस to मा ताकि जब तपाईं आईओएस install स्थापना गर्नुहुन्छ तपाईं यसलाई स्क्र्याचबाट गर्नुहुन्छ र आईफोन साँच्चै सफा छ। यसले अपरेटि system प्रणालीको अधिक अनुकूलन बनाउनेछ।
कसरी आईओएस from बाट आईओएस to मा फिर्ता जाने? धेरै सजीलो। हामी के गर्न जाँदैछौं हाम्रो उपकरणमा राखिएको छ रिकभरी मोडयो गर्नका लागि हामीले आइट्यून्ससँग जोड्नै पर्दछ र साथसाथै पावर होल्ड गर्नुहोस् र स्क्रिन कालो नहुँदासम्म बटनहरू सुरू गर्नुहोस्। जब स्क्रिन बन्द हुन्छ हामीले बटनहरू समात्नु हुँदैन। केहि सेकेन्ड पछि एप्पल लोगो देखा पर्नेछ, जब यो हुन्छ हामीले पावर बटन रिलीज गर्नुपर्दछ तर आईट्यून्स लोगो देखा नपर्दा केही थप सेकेन्डको लागि स्टार्ट बटन थिच्नुहोस्। अब हामी आईट्यून्समा जान्छौं र हामी 'रिकभर' क्लिक गर्दछौं, यसले स्वतः आईओएस install. स्थापना गर्दछ। यो अपरेटि system प्रणालीको साथ हामीले के गर्नु पर्ने भनेको बुधवार हामीलाई उपकरणलाई सूचित गर्न पर्खनु पर्दछ कि आधिकारिक संस्करण र यसलाई सामान्य तरीकाले स्थापना गर्नुहोस्। यदि तपाईं बुधवार पछि आईओएस Wednesday मा फर्कने योजना गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई त्यो थाहा हुनुपर्छ यो सम्भव छैनएप्पलले यो सफ्टवेयरमा हस्ताक्षर गर्न रोक्दछ।
तपाईंहरू जसको आईओएस have छ र आईओएस installed कहिल्यै स्थापना गर्नुभएको छैन, म पनि सिफारिस गर्दछु, पुनःस्थापना गर्नुहोस्। यस तरिकाले हामी आईओएस guarantee लाई ग्यारेन्टी गर्नेछौं राम्रो प्रदर्शन गर्नुहोस्। आईफोन सफा राख्नु अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, तर यो हाम्रो उपकरणको लागि उत्तम छ। जे भए पनि, पहिले ब्याकअप गर्नु राम्रो हुन्छ।
थप जानकारी - आईओएस to मा अपडेट भए पछि यो केहि अनुप्रयोगहरू हुनेछन्
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस7कसरी स्थापना गर्ने र तपाईंको आईफोनको प्रयासमा मर्दैन
आईफोन Installs मा Ios7 स्थापना गर्नुहोस् र यो राम्रो कार्य गर्दछ .. तर धेरै लग
जोस भेलेन्टिन गार्सिया भन्यो
यस कारणका लागि, म आईओएस returning मा फर्कने प्रक्रियामा छु। तर दुर्भाग्यवस यसले मलाई install.१.२ स्थापना गर्न अनुमति दिँदैन केवल .6.१.,, आईओएस very एकदम राम्रो छ र सबै तर पुराना मिडिया उपकरणहरूले यसलाई सबै समात्दैन।
यदि कसैलाई .6.1.2.१.२ कसरी स्थापना गर्ने थाहा छ भने राम्रो हुन्छ
होसे भेलेन्टन गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईको आईफोनमा आईओएस .6.1.2.१.२ को शेश छ भने तपाईले टिनीम्ब्रेलाको साथ यसो गर्न सक्नुहुनेछ किनभने एप्पलले लामो समयको लागि हस्ताक्षर गर्न रोके पछि यो हालै बुधवार सम्मका लागि साइन इन गर्दछ it.१..6.1.3 छ।
डेरिकलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग तिनीहरू छैन - धेरै नराम्रो .. जे भए पनि धन्यवाद
राउल सेबल भन्यो
के दिन D पछि पुन: भण्डार हुन्छ? म आईओएस directly को सट्टामा आईओएस install स्थापना गर्नेछ, एन?
पहिले आईओएस previously को जीएम हुनु
राउल सेबल Rep लाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस डेल बारको भन्यो
ठ्याक्कै, तपाईं आईओएस to मा फिर्ता जान सक्षम हुनुहुने छैन एक पटक आईओएस released जारी भयो।
लुइस डेल बार्कोलाई जवाफ दिनुहोस्
र त्यहाँ आईओएस back मा फिर्ता जान वा जीएमबाट सीधा पुनर्स्थापना गरेर, र आधिकारिक आईओएस6पुन: स्थापनामा के कुनै फरक छ? धन्यवाद।
जीएमको साथ हाल, यदि म आईट्यून्सबाट १ after पछि पुनःस्थापना गर्दछु, पुरा संस्करण आईट्यून्समा डाउनलोड हुनेछ आईफोनमा पुनःस्थापना गर्न वा यो केवल फोनको स्मृतिमा रहेको प्रतिलिपिबाट अपडेट हुनेछ ?, मलाई थाहा छैन यदि म आफैंलाई व्याख्या गर्छु, म के चाहन्छु पीसीमा आधिकारिक संस्करण पुन: डाउनलोड गर्नुहोस् र जीएमलाई पूर्ण रूपले क्रश गर्नुहोस्
PB लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार राम्रो, मेरो प्रश्न जगेडाको बारेमा छ। यदि म यो iOS6 को साथ गर्दछु, यसले मलाई पुनर्स्थापित iOS7 मा राख्न दिदैन, हैन?
अवश्य पनि, आईओएस संस्करणको पर्वाह नगरी ब्याकअपहरू अनुकूल छन्।
त्यो सत्य होइन। Ios7 को ब्याकअपले काम गर्दैन यदि तपाईं आईफोनलाई पुनःस्थापना गर्नुहुन्छ र ios6 मा फिर्ता जानुहुन्छ भने।
र यदि तपाईंले यसलाई सफा छोड्नुभयो भने के तपाईं सबै जानकारी गुमाउनुहुन्छ? टेलिफोन जस्तै?
पपीलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, त्यसैले ब्याकअप बचत गर्नका लागि सुझाव दिइन्छ
र म आईओएस bet बीटा from बाट आईओएस back मा पछाडि जानु बिना अपडेट गर्न सक्दिन?
KyrosBlanck लाई जवाफ दिनुहोस्
सिद्धान्तमा तपाईं सक्षम हुनुपर्दछ, तर म भन्छु, आईफोन राम्रो पुनर्स्थापना हुनेछ
कुरा यो हो कि, तपाईंले आईओएस with को साथ गरेको केहि बचत गर्न सक्नुहुन्न, हैन? र सत्य कुरा, म सूचना xD गुमाउन चाहन्न
पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आईफोनलाई नयाँको रूपमा छोड्नुहोस्, आईओएस install स्थापना गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्याकअप पुनर्स्थापित गर्नुहोस्? वा पछि फेरि नयाँको रूपमा सेट अप गर्नुहुन्छ? किनभने यस तरिकाले हामी नोटहरू, सन्देशहरू, च्याटहरू, आदि हराउने छौं ...
यसलाई नयाँको रूपमा सेट गर्नुहोस् वा निर्भर गर्दैन जुन तपाईं सबै कुरा हराउन इच्छुक हुनुहुन्छ।
नमस्ते लुइस, मलाई त्यो पहिले नै थाहा थियो। मेरो प्रश्न यो थियो कि सफाई पुनर्स्थापना जस्तै हो जुन यसलाई नयाँको रूपमा स्थापना गर्ने, वा आईओएस installing स्थापना गर्ने र ब्याकअप पुनर्स्थापित गर्ने जत्तिकै हो। धन्यबाद।
IOS GM GM बाट IOS7मा पुन: भण्डारण गर्न को लागी पछाडि जान मैले बुझिन। यदि हामी आईओएस Fin अन्तिम संस्करणमा सीधा पुनर्स्थापना गर्छौं भने, यो उस्तै हुनेछैन र?
दानलाई जवाफ दिनुहोस्
एडगर जूलियन रियोस क्रूज भन्यो
मैले जीएम स्थापना गरेको छु, तर यदि म डाउनग्रेड गर्न चाहन्छु भने म सक्दिन किनकि आईट्यून्सले मेरो आईफोन समर्थन गर्दैन, म केहि पनि गुमाए बिना यो कसरी गर्न सक्छु।
एडगर जूलियन रियोस क्रुजलाई जवाफ दिनुहोस्
म कल्पना गर्छु कि हामीले आइट्यून्स संस्करण पनि डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।
तपाईँ सक्नुहुन्न। तपाईले आईफोनलाई .6.1.4.१. restore लाई पुन: स्थापित गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ एक पटक यसले तपाइँले बनाउनु भएको अन्तिम प्रतिलिपि पुन: भण्डारण गर्न दिन्छ (आशा छ जीएम स्थापना गर्नु अघि एक हप्ता अघि)
मैले भर्खर पढें, कि iTunes बाट पुनर्स्थापना क्लिक गरेर, जब आईओएस the मा १ comes मा बाहिर आउँदछ, आधिकारिक संस्करण स्थापना हुनेछ। थप छैन। यदि हामी पुनर्स्थापना र नयाँ को रूप मा कन्फिगर छैन भने, हामी सफा बहाल हुनेछ। अभिवादन!
मसँग एउटा प्रश्न छ जुन मलाई कहिले पनि स्पष्ट हुँदैन।
यदि मैले ब्याकअप प्रतिलिपि बनाएँ भने, त्यसपछि म आईफोन पुनर्स्थापना गर्दछु र जब आईट्यून्स खुल्दछु म यसलाई नयाँ फोनको रूपमा कन्फिगर गर्न सोध्छु, के मैले बिल्कुलै सबै कुरा पुन: कन्फिगर गर्नु पर्छ (सम्पर्कहरू, ईमेल खाताहरू, तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू ...) स्क्र्याचबाट ?
हो, तर यो उनीहरूको सिफारिस हो, मलाई लाग्छ।
के उनीहरूले सिफारिस गर्छन् तपाई आईफोनलाई सुरूबाट आईओएस install स्थापना गर्न पुनःस्थापना गर्नुहोस् तर त्यसपछि तपाईलाई आफ्नो ब्याकअपको साथ कन्फिगर गर्नुहोस्। यो io7 ios7 भएको भन्दा स्थापना गर्नु भन्दा उत्तम छ।
डिएगो मार्टिनेज भन्यो
र आईफोनबाट सिधै अपडेट गर्न सक्दैन?
डिएगो मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
क्रिस्टियन 29 भन्यो
मसँग सच्चाइमा धेरै शंका छ। मसँग S.१..6.1.3 एक S एस मा छ र म आईओएस install स्थापना गर्न कुर्दिन सक्दिन। मेरो विचार आईओएस from बाट आईओएस to मा जानको लागि मोबाइलबाट यसलाई स्थापना गर्ने बित्तिकै यसको स्थापना गर्नु थियो। तपाईले टिप्पणी गर्नुभयो कि यो पुनर्स्थापना गर्नु उत्तम छ, र यसलाई कारखानाबाटै छोड्नुहोस्, तर यसबाट अलग सम्पर्कहरू, एसएमएस ... के म पनि अनुप्रयोगहरू हराउनेछु? सत्य यो हो कि मेरो S एस ले एक समय लिन्छ जुन यो गर्नु ठीक हुदैन र अधिसूचनाहरू २ वा weeks हप्ता भएको छ जुन दुई पटक ध्वनी हुन्छ।
Christian29 लाई जवाफ दिनुहोस्
के कसैलाई थाहा छ जब आईट्यून्स ११.१ विन्डोजको लागि जारी हुन्छ?
यस अपराह्न आईओएस संग सँगैको लागि निश्चित साथ 7. बधाई छ!
एंजेलिका मोन्सेरथ भन्यो
मैले आईओएस installed लाई मेरो सेल फोनमार्फत स्थापना गरें र मैले अपडेट समाप्त गरेपछि मलाई आईट्यून्समा जोड्न भन्यो, समस्या यो हो जब मैले मेरो उपकरण पीसीमा जडान गर्दा यसलाई चिन्न सकेन, मैले सबै कुरा गरे। मलाई इमानदारीताले के गर्ने थाहा छैन
एंजेलिका मोन्सेरथलाई जवाफ दिनुहोस्
यो पूर्ण गडबडी छ ... मसँग आईओएस G जीएम स्थापना भएको थियो ... (मसँग प्रणालीको केही इन्टरफेस त्रुटिहरू थिए) जब आधिकारिक आईओएस out बाहिर आउँदछ, मैले के गरे त्यसैले उनीहरू पुनर्स्थापना र नयाँको रूपमा कन्फिगर गर्ने थिए, यति राम्रो, मेरो सुरक्षाको प्रतिलिपि पुनर्स्थापित गर्दा जब मैले आईओएस GM जीएममा सबै जानकारी राम्रोसँग स्थापना भएको थियो तर ती तीनै ईन्टरफेस त्रुटिहरू (अहेम: पृष्ठभूमि धमिलो वा अधिसूचना प्रणालीको पारदर्शिता हराउँदछन्, सबै कुरा कालो तुल्याउँदछ। केहि कुरूप), राम्रोसँग मलाई थाहा छ के गर्नुपर्दछ7बाट स्थापना गर्नुहोस्, नयाँको रूपमा कन्फिगर गर्नुहोस्, र ब्याकअप पुनर्स्थापित नगर्नुहोस्, केवल हाम्रो आइकलाउड खाता राख्नुहोस् र ती सबैको साथ हाम्रो सबै जानकारी फर्किनेछ, समस्या यो हो कि मैले मेरो बचत गर्नुपर्दछ। पाठ सन्देशहरू, जुन ICLOUD ले केहि गर्दैन तर iMessages, धिक्कार छ, अब मलाई के गर्ने थाहा छैन !!!! मेरा पाठ सन्देशहरू years बर्ष अघि हराउँनुहोस् वा आईओएस interface इन्टरफेस त्रुटिसँग जारी राख्नुहोस् !!!!! = (
आईफ्रुट, अनुप्रयोग जुन तपाईं GTA V अनुभव विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ
ब्लर, आईओएस for का लागि वालपेपर बनाउने एक उत्तम अनुप्रयोग